Al-Shabaab oo laga xiray bogga twitter-ka - BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal
Al-Shabaab oo laga xiray bogga twitter-ka
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 25 Janaayo, 2013, 19:02 GMT 22:02 SGA
al-Shabaab waxa ay bogga isticmaaleysay ilaa 2011
Xarakada al-Shabaab oo sameysay boggaasi sanadkii 2011, ayaa waxa la oran jiray HSMPress, waxaana ku xirnaa tobanaan kun oo qof oo la socon jiray wararka ay soo geliyaan.
Al-Shabaab, waxa ay inta badan u istcimaali jireen inay soo geliyaan sheegashada weerarrada ay ku qaadaan ciidanka Midowga Afrika ee Soomaaliya jooga iyo kuwa dowladda Soomaaliya, Qaraxyada ay fuliyaan iyo fariimaha ay doonayaan inay gudbiyaan.
al-Shabaab waxa ay dhawaan ku hanjabtay inay dili doonto dad Kenyan ah
Dhawaan waxa al-Shabaab ay soo gelisay boggaasi twitter-ka sawirka askari Faransiis ah oo ay sheegeen inuu u dhintay dhaawacii ka soo gaaray dagaalkii dhexaray iyaga iyo ciidanka Faransiiska ee doonayay inay soo firtaan qof u dhashay Faransiiska oo ay haysteen al-Shabaab. Askarigaasi waxaa meydkiisa ay ag yaalay qalab militeri.
Xiritaanka bogga waxa uu ku soo beegmay maalmo kaddib markii Arbacadii ay ku hanjabeen in ay dili doonaan dad u dhashay Kenya oo ay hayaan, haddii dowladda Kenya aanay sii deyn dadka u xiran argagaxisada.
Laura Hammond, oo ah macallin sare oo wax ka dhigta Iskuulka la yiraahdo SOAS ee Jaamicadda London, ayaa BBC u sheegtay in dowladda Mareykanka ay intii muddo ahba dooneysay sidii bogga alShabaab loo xiri lahaa, laakiin ma aanay hayn qaabkii sharci ahaan ay ugu qasbi lahayd Shirkadda Twitter.
Shirkadda twitterka waa ay ka gaabsatay inay wax war ah ka bixiso xiritaanka bogga al-Shabaab, laakiin waxa uu sharcigoodu qabaa in aanay oggoleyn hanjabaado dagaal.
inkasta oo la xiray boggaasi oo luqado kala duwan ay ku qori jireen, haddana BBC waxay oggaatay in boggooda kale ee af-Carabiga uu weli shaqeynayo.